Noocyada xagaaga: waqti aad dharkaaga gaagaaban uga saareyso armaajada | Bezzia
Noocyada xagaaga: waa wakhti aad dharkaaga gaagaaban uga saareyso qolka
Maria vazquez | 07/06/2021 10:00 | Maxaan xirtaa
Wax walba waxay muujinayaan in usbuucaan aan awoodi doonno inaan ku raaxeysano waqti xagaaga ah, in kastoo si rasmi ah aanan u geli doonin xilli ciyaareedkan illaa iyo 21-ka Juun ee soo socota. Waqtiga laga saarayo, haddaba, gaab ama gaab, si loo abuuro qaabab sida kuwa maanta aan wadaagno.
Gaabyada waa a dharka la xidhiidha xagaaga, in kasta oo ay iyaguna jiraan kuwa iyagu xidha xilliga qaboobaha. Dharka ugu fiican ee lagu raaxeysto maalmaha ugu kulul ee lagu daro shaatiyadaha, blouses ama shaati iyo kabo ama shaati. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u sameeyaan?
Sidii caadiga ahayd, Isniin kasta waxaan u adeegsan jirnay xisaabaadka kala duwanaanshayaasha moodellada kala duwan inay kula wadaagaan sagaal muuqaal Sagaal dharka xagaaga oo leh hal hoose oo keliya: dhammaantood waxay soo bandhigaan gaab ama gaagaaban.
Waan qiimeyn karnaa isbeddellada kala duwan haddii aan tixraacno noocan ah surwaal. Dharka gaaban ee Denim ayaa wali ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan marka xagaagu yimaado, si kastaba ha noqotee, sanadkaan gaagaaban dhexda lagu sameeyay dharka fudud sida gogosha. Kuwa ugu fiican, shaki la'aan, wajihi maalmaha ugu kulul.
Haddii aan tixraacno xulashooyinka kala duwan ee aan ku dari karno, waa inaan sidoo kale ka hadalnaa laba isbeddel. Midka ugu horreeya, ee dhiirrigelinta ugu yar, ayaa nagu martiqaaday inaan ku darno iyaga Funaanado aasaasi ah ama shaati cad ama madow oo ku dhammaystir muuqaalka kabo fidsan ama funaanado si aad ugu raaxaysato.
Isbeddel labaad ayaa nagu dhiirrigelinaya in la isku daro gaagaaban funaanado ama buluugyo dhiirrigelin ah. Waxay noqon karaan shaati ay ku daabacan yihiin ubax daabacan iyo / ama leh faahfaahin faahfaahsan sida lece, ruffles ama gacmo barar leh. Si aad u dhammaystirto muuqaalkaaga, waxaad u baahan doontaa oo keliya kabaha kabaha cidhib-yar ama dhexdhexaad ah, kuwa aad ku dareento raaxada ugu badan, iyo qalabka raffia.
Badanaa miyaad xirtaa gaagaaban xagaaga? Mise waxaad doorbideysaa inaad xirto goonno ama dhar markaad rabto inaad gaabiyo?
Sawirro - @abdirisaaq, @bartabacmode, @abdisalaam, @abdihakin_abdi, @ abdisalamismaXNUMX, @abdihakin_abdi, @jilboob, @auroraartacho
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Noocyada xagaaga: waa wakhti aad dharkaaga gaagaaban uga saareyso qolka
Sida loo xakameeyo walaaca si loo cuno
Sida loo sameeyo bushimaha xaydhka